Jeremy Mathieu Oo Kahadlay Dhibaatadii Uu Kala Barcelona Iyo Tan Hada Uu Ku Jiro Lenglet.
HomeHoryaalka SpainJeremy Mathieu oo kahadlay dhibaatadii uu kala barcelona iyo tan hada uu ku jiro Lenglet.
February 23, 2021 Horyaalka Spain, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Iyada oo dhaleeceyn iyo xawaare ku socota daafaca Barcelona Clement Lenglet, ciyaaryahankii hore ee Blaugrana Jeremy Mathieu wuxuu u arkaa wax la mid ah waqtigiisii Camp Nou.
Lenglet ayaa laga daawaday isagoo ilmeynaya markii uu ka tagay Camp Nou ka dib barbarihii isbuuca ee ay la galeen Cadiz, taasoo keentay inuu rigoore soo daahdo uu keenay sidaas darteedna ay la micno tahay in Barcelona ay laba dhibcood oo dheeri ah Lumisay tartanka LaLiga Santander.
Mathieu ayaa u sheegay RAC1 inuu u sheegay RAC1. Waxaan dareemay in guuldaradii ka dhacday Turin ay ahayd qaladkeyga.
“Laakiin ma fahmin sababta ay aniga ii aadeen iyadoo kow iyo toban ciyaartoy ay ciyaarayaan kubada cagta. Kaliya waxaan dareemay qolka labiska. Cidina ma bixin taageero. Aniga ahaan, taasi maahan kubada cagta.
Qof walba wuxuu dilayaa Lenglet hadda, waana ogahay waxa ay taasi tahay. Waa inuu isku dayaa oo uu fiicnaadaa oo uu u weeciyaa, oo uu isku dayaa intii karaankiisa ah.
Ciyaartoy kale oo Barcelona ah oo u yimid dhaleeceyn, waa Antoine Griezmann, oo aan soo bandhigin qaab ciyaareedkiisa Atletico Madrid tan iyo markii uu u dhaqaaqay Blaugrana.
“Ma uusan aheyn heer uu joogay Atletico,” Mathieu ayaa sii waday. Waxaan u maleynayaa inuu ku qaldamay inuu u saxiixo Barcelona.
Atletico waxa uu u ahaa mid muhiim ka ah kooxda, mana ogi inuu booskaas ku leeyahay Barcelona ayuu hadalkiisa kusoo afjaray daafacii hore kooxda barcelona Mathieu.